Newsletter | U.N.O.B | Page 2
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Forward mail ကနေဖတ်လိုက်ရလို့ပြန်ဝေမျှတာပါ။ အပျင်းပြေပေါ့၊ ရေးထားတဲ့သူရဲ့ နာမည်တော့ မတွေ့ရဘူး။ ရေးတဲ့သူ သို့မဟုတ် သိတဲ့သူများရှိခဲ့ရင် ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းကြားပေးပါ။ နာမည်ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ ဆောင်းတွင်းအိပ်မက် စူးရှလွန်းလှသော အသံကြောင့် ကျွန်တော် လန့်နိုးလာခဲ့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်ရောက်နေခြင်းပါ။ ဘေးမှာက တရုတ်မလေးတစ်ယောက် (more…) Read More...
2011 Green Card မဲ လျောက်လွှာများ စတင်လက်ခံ
2011 Green Card မဲဖေါက်ရန်လျောက်လွှာများလက်ခံနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အကူအညီလိုအပ်ပါက UNOB Contact Email သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါချို့ယွင်းချက်ပါရှိသောဓါတ်ပုံများကို လျောက်လွှာတွင်လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ၁။ ပင်ကိုမဟုတ်ဘဲ ဖြည့်စွက်ထားသောဓါတ်ပုံများ။ ဥပမာ – နုတ်ခမ်းမွှေး (အတု)၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး (အတု)။ ၂။ မူရင်းဓါတ်ပုံကို ကျုံ့ထား ဆန့်ထားခြင်း။ ဥပမာ – မူရင်းပုံကို (more…) Read More...
2010 Census What Count The census isacount of everyone residing in the United States: in all 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico and the Island Areas. Who Everyone All residents of the United States must be counted. This includes people of all ages, races, ethnic groups, citizens and non-citizens. When Every 10 years Every 10 years, and the next census occurs in 2010. Census questionnaires will be mailed or delivered to every household in the Read More...
UNOB Account at Bank of America
We are happy to inform you that now you can send your donations or member fees to UNOB by using either personal check or online banking. We just opened an account at Bank of America and are planning to open an account at Paypal for your convenience. Kindly reminder to our members, we do make E.C meeting every two months and those of you who want to know how we handle the funds of our organizatoin, you can directly contact our treasurer, Read More...
Statement Of United Nationals Organization of Burma
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) United Nationals Organization of Burma (UNOB) ဖွဲ့စည်းခြင်းကျေညာချက် Founding Statement August 08th , 2009 မြန်မာပြည်ဘွားတိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမများခင်ဗျား – အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း နုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါသည်။ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများဖြစ်ကြသောကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောင်းကျိုးညီညွတ်စွာဖြင့် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ ဖို့လော် ဒါဒေးမြို့တွင် `မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)´ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေ (၂၇) ၇က်တွင် အောင်မြင်စွာဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရောက်သူ(၃၈)ဦးပါဝင်သော စတင်ဖွဲ့စည်းကြသည့်အစည်းအဝေးကြီးမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(ယာယီ)၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ရေးဆွဲ တင်မြောက် ချမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးချိန်မှစ၍ အားလုံး၏ဆန္ဒနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သော (၁)အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံး၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကိုထိန်း သိမ်းရန် (၂)အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများပိုမိုတိုးတက်စေရန် (၃)အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ လူမှုရေးကိစ္စများနှင့်အ ကျိုးစီးပွါးကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှကူညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့ကြီး၏အမည်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အစိုးရထံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့အချိန်ကာလများတွင် မြန်မာပြည်မှလာရောက်အခြေချနေထိုင်သူ ထူးထူးခြားခြားများပြားလာနေပါသည်။ အခြားသောတိုင်းပြည်များမှလာရောက်အခြေချနေထိုင်သူများနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ရှင်သန်လိုကြပါ သည်။ တဦးချင်း၏အခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေအရကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ လူနည်းစုတခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရရေးနှင့် ဥပဒေအရ ရသင့်သည့်အ ခွင့်အရေးများ ပြည့်ပြည့်၀၀ ရယူချင်ကြပါသည်။ မိမိတို့၏ပြည်သူပြည်သား၊ တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားနှင့်အမျိုးအနွယ်စုများ၏အရေးကို ပရဟိတအများအကျိုးဆောင်လိုသူများက ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊ အစု အဖွဲ့ အသင်းများတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်၎င်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ လုပ်ဆောင်ဆဲရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေးစားစွာသိကြပါ သည်။ ထိုထိုအသင်းအဖွဲ့များ၏အကျိုးဆောင်မှုများရှိနေငြားသော်လည်း အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောရည်ရွယ်ချက်များရရှိရေးမှာ Read More...
Mr. Brang Shawng Secretary United Nationals Organization of Burma (USA) ကျွန်တော်သည် UNOB အသင်းကြီးသို့မဝင်မှီအသင်းကြီး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင် ချက်များကိုလေ့လာကြည့်ရာ မွန်မြတ်လှသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အားရကျေနပ်ဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင် ချက်များကိုတွေ့ရပေသည် ထို့ကြောင့်မြန်မာ နိုင်ငံသားတယောက်အနေဖြင့် အသင်းကြီး ရည်ရှည် တည်တံခိုင်မြဲရေးအတွက်မိမိတက်နိုင်သည့်ဘက်မှအုတ်တချက်သဲတပွင့်အားဖြင့်ကူညီပါဝင်သင့်သည် ဟုယူဆပြီး (7/29/09) နေ့တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပေသည် အသင်းကြီးတည်တံခိုင်မြဲရေးဆိုရာတွင်အသင်းကြီးချမှတ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်သုံးချက်အတိုင်းရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ပြီးတာဝန်အလိုက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည် မြန်မာလူမျိုး တို့သည် မိမိတို့လူမှူ့ရေး ကိစ္စများနှင့် အကျိုးစီးပွားများဆောင်ရွက်ရာတွင် အရိုးစွဲနေပြီဖြစ်သော စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှူ့စိတ်ကြောင့် တဖက်မှ မတရားမှူ့များ မမှန်ကန်မှူ့များ တွေ့ ရှိစေကာမူ သည်းခံနေ လေ့ ရှိပေသည် တဘက်မှလဲ မိမိနားမလယ်သောအချက်များဟု အထင်သေးယူဆကာ အနိုင်ယူလေ့ ရှိပေသည် ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်(3)တွင်ပါရှိသော လူမှူ့ရေး နှင့် အကျိုးစီးပွား ကိုကူညီ ရန် ဆိုရာတွင် တ ယောက် ချင်းအနေဖြင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာနှင့် ပညာ ဗဟုတုတများ အထူး လိုအပ်လှသည်မှာ သိသာ ထင်ရှားလှပေသည် ထို့ကြောင့် အသင်းသားများ အနေဖြင့် ပညာဗဟု တုတ များ ရရှိစေပြီး ကြောက်ရွှံ့စိတ်များကျိုးစားဖျောက်ယူစေနိုင်သည်သာမက အသင်းသား များ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှူ့ကိုရယူစေနိုင်သော အောက်ပါအချက်များကို UNOB အသင်းကြီး လုပ်ဆောင်ချက် များတွင် Read More...